I-bungalow e-Ligne Paradis (Saint-Pierre) - I-Airbnb
I-bungalow e-Ligne Paradis (Saint-Pierre)
Ravine des Cabris, Saint-Pierre, i-Réunion
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Olivier
I-bungalow engu-30m² 8min ukusuka e-Saint-Pierre (ibhishi, izindawo zokudlela ...) futhi ngesikhathi esifanayo emaphandleni, kuthule. Ukufinyelela kalula intabamlilo, Cilaos, Entre-Deux, Les Makes, wild south ... Indawo yokuhlala ezimele, ekahle imibhangqwana.
Indawo yokuhlala ingemuva kwendlu yabanikazi, kodwa iyimfihlo ephelele futhi izimele ngokuphelele (ngaphandle kwendawo yokupaka).
Kuyi-bungalow yonke ngobude, ngakolunye uhlangothi, igumbi lokulala (umbhede umbhede ophindwe kabili ku-140), uhlukaniswe negumbi lokuhlala, kanti ngakolunye, ishawa lokungena.
Phakathi nendawo, igumbi lokuphumula-ikhishi lizokunikeza yonke induduzo edingekayo: i-gas hob, i-oven kagesi, i-microwave, umenzi wekhofi, i-toaster, umshini wokuwasha, i-ayina nebhodi loku-ayina, ihhashi lezingubo.
Itholakala ku-hamlet emaphakathi nezimo zomoba, i-bungalow inikeza ukufinyelela ezitolo ezincane (3min ngemoto usuka eParadis Line, noma 6min ukusuka eRavine des Cabris).
Indawo yokupaka eyodwa kuphela etholakalayo, evikelwe ngesango lekhodi.
I-bungalow nendlu yethu kuyingxenye yeqembu elincane lezindlu endaweni yokulima, ikakhulukazi enezimoba. Umgwaqo ongenela (izindlela ezimbili) umncane futhi awuminyana. Ngakho-ke imvelo izolile. Izitolo zokuqala ziyimizuzu emi-3 ngemoto.
J'aime les randonnées, le trail, le VTT, les voyages, le tennis.
J'aime aussi écouter et jouer de la musique (percussions, piano ...)
A la Réunion, les possibilités sont nombreuses pour faire du sport ou écouter de la musique ...
Ngingakunikeza iseluleko mayelana nezingosi ongazivakashela, uhambo lokuqwala izintaba, amakheli ezindawo zokudlela ezinhle, abahlinzeki besevisi, njll.
Hlola ezinye izinketho ezise- Ravine des Cabris namaphethelo